သမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်နဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေဇဝေဇဝါဖြစ်စေမယ့် မေးခွန်းလေးတစ်ခုကို မေးလာတဲ့ ချစ်သုဝေ - Cele Connections
သမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်နဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေဇဝေဇဝါဖြစ်စေမယ့် မေးခွန်းလေးတစ်ခုကို မေးလာတဲ့ ချစ်သုဝေ
ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေက သာယာလှပပြီး နားလည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့ မိသားစုလေးကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေက အနုပညာလုပ်ငန်းမှာသာ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာရရှိထားသလို အိမ်ထောင်တစ်ခုကိုလည်း အကောင်းဆုံး တည်ဆောက်ထားကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ရဲ့ အမြွှာသမီးလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်တို့ကလည်း အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းပြီး လိမ္မာလွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အသည်းတုန်အောင် ချစ်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် (၂) မိနစ်သာကွာကြတဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ကတော့ အမြွှာလေးတွေပီပီ ရုပ်ချင်းတူတယ်ဆိုပေမယ့် သေသေချာချာကြည့်ရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြတဲ့ကလေးလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ချစ်သုဝေက ပရိသတ်တွေအတွက် မျက်စိလည်စေမယ့် သမီးလေးတွေရဲ့ တစ်ယောက်ချင်းစီ ဓာတ်ပုံလေးကို ချပြပြီး “ခေတ် or သစ်??😁” ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံထဲကသူက သမီးကြီးခေတ်လား သမီးငယ်သစ်လားဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်လေးကတော့ သစ်ထက် လူကောင်ပိုကြီးပြီး မျက်နှာလေး ပိုဝိုင်းသလို သစ်လေးကတော့ လူကောင်နည်းနည်းပိုသေးကာ မျက်နှာလေးက ပိုသွယ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော ခေတ်နဲ့သစ်ကို တစ်ယောက်ချင်းစီမြင်ရင် မှတ်မိနိုင်ပါ့မလား ပြောပြခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Chit Thu Wais fb
သမီးလေးတှဖွေဈတဲ့ ခတျေနဲ့သဈနဲ့ ပကျသတျပွီး ပရိသတျတှဇေဝဇေဝါဖွဈစမေယျ့ မေးခှနျးလေးတဈခုကို မေးလာတဲ့ ခဈြသုဝေ
ပွညျသူခဈြ အနုပညာရှငျ ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျဖွဈကွတဲ့ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝကေ သာယာလှပပွီး နားလညျမှုအပွညျ့အဝရှိတဲ့ မိသားစုလေးကို တညျဆောကျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝကေ အနုပညာလုပျငနျးမှာသာ အောငျမွငျမှုတှေ မြားစှာရရှိထားသလို အိမျထောငျတဈခုကိုလညျး အကောငျးဆုံး တညျဆောကျထားကွတဲ့ ဇနီးမောငျနှံတှပေဲ ဖွဈကွပါတယျ။ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့ရဲ့ အမွှာသမီးလေးနှဈယောကျဖွဈတဲ့ ခတျေနဲ့သဈတို့ကလညျး အရမျးကိုခဈြစရာကောငျးပွီး လိမ်မာလှနျးတာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ အသညျးတုနျအောငျ ခဈြနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ (၂) မိနဈသာကှာကွတဲ့ ခတျေနဲ့သဈတို့ ညီအဈမနှဈယောကျကတော့ အမွှာလေးတှပေီပီ ရုပျခငျြးတူတယျဆိုပမေယျ့ သသေခြောခြာကွညျ့ရငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူကွတဲ့ကလေးလေးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာတော့ ခဈြသုဝကေ ပရိသတျတှအေတှကျ မကျြစိလညျစမေယျ့ သမီးလေးတှရေဲ့ တဈယောကျခငျြးစီ ဓာတျပုံလေးကို ခပြွပွီး “ခတျေ or သဈ??😁” ဆိုပွီး ဓာတျပုံထဲကသူက သမီးကွီးခတျေလား သမီးငယျသဈလားဆိုပွီး မေးခှနျးထုတျလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ခတျေလေးကတော့ သဈထကျ လူကောငျပိုကွီးပွီး မကျြနှာလေး ပိုဝိုငျးသလို သဈလေးကတော့ လူကောငျနညျးနညျးပိုသေးကာ မကျြနှာလေးက ပိုသှယျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးထဲမှာရော ခတျေနဲ့သဈကို တဈယောကျခငျြးစီမွငျရငျ မှတျမိနိုငျပါ့မလား ပွောပွခဲ့ကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
အသက်ထက်မကချစ်ရတဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေး Jewel ရဲ့ (၆) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို လက်ဆောင်တွေအများကြီးနဲ့ ပျော်ရွှင်ရအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ မျိုးစန္ဒီကျော်
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရွှေထူးဆီက မပြောပဲရတဲ့ အလိုက်သိတတ်မှုလေးတစ်ခုအတွက် မိန်းမသားတစ်ယောက်ပီပီ ဝမ်းသာကြည်နူးနေတဲ့ ရွှေမှုံရတီ
ပရိသတ်တွေတောင် ကြွေသွားရလောက်တဲ့အထိ ချစ်ဇနီးလောင်းလေးအတွက် ချစ်စကားတွေဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ဆိုလာတဲ့ နိုင်းဝမ်း
The Voice ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုလည်း အနီးကပ်လေ့ကျင့်ပေးနေရသလို အိမ်ပြန်ချိန်မှာလည်း သားသမီးတွေကို အချိန်ပေးရင်း ဖခင်တာဝန်ကျေပွန်လျက်ရှိတဲ့ R ဇာနည်